चैत २२ गते शनिबार, आजको राशिफल हेर्नुहोस् कस्तो छ तपाइको भाग्य ! – Massive Khabar
Homeधार्मिकचैत २२ गते शनिबार, आजको राशिफल हेर्नुहोस् कस्तो छ तपाइको भाग्य !
चैत २२ गते शनिबार, आजको राशिफल हेर्नुहोस् कस्तो छ तपाइको भाग्य !
साझेदारी व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त नाँफा कमाउँन सकिनेछ । पर्यटन सम्वन्धी व्यावसाय फस्टायर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन वित्ने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रेम तथा पति पत्नी विचको सम्बन्धको गाठो कसिलो भएर जानेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुलाई पछाडी पारिनेछ । वैदेशिक यात्राको सम्भावना निकै बलियो रहेको छ । साथिभाई तथा आफन्तबाट उत्साहजनक सहयोग प्राप्त हुनेछ ।मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) सत्रु तथा प्रतिस्पर्धीहरु आईलाग्ने भएपनि अन्तत तपार्ईँको क्षमता देखेर आफै साईड लाग्नेछन् । स्वास्थ्य सम्वन्धी पुराना समस्याहरु ठिक हुँदै जाने तथा काम गर्न सहज वातावरण बन्नेछ । पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउँदै अगाडी बढ्ने समय रहेकोछ । पुराना ऋणहरु सकाउँदै नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ । नोकरिमा प्रवेशको सम्भावनालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । प्रेम प्रशङगमा एक अर्काविच नजिक हुने तथा रमाउँन सकिनेछ ।
गलबन्दी गित गाउन लगाएर महानायकले हाने डान्स, अन्जली देखेर राजेश हमाललाई भयो गाह्रो ! ( भिडियो सहित )
तपाईको आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् असोज ९ गते बिहिबारको राशिफल !
पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाले २० दिनभित्र दाइजोबापत पाएको जग्गा खाली गर्नुपर्ने
थप ७२ जनामा कोरोना पुष्टि : सङ्क्रमित ६ सय ७५ पुगे
भारी बोक्दै जीवन गुजारे, सडकमै अन्तिम सास फेरे
आज थप १९ जनालाई कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ६०३ पुग्यो